အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Phyo WP - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Phyo WP
၃ Translation needed
၈ New sign-up page for the Medical Translation Project
၁၀ Township name error
၁၂ may I change "တမ်းပလိတ်:Wel-come" picture with png instead of jpg?
၁၃ New section
၁၄ Barnstar for you!
၁၆ Participate in the Ibero-American Culture Challenge!
၁၈ Editor အကောင့် links တွေ ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပါ။
၂၀ How to edit or create
မင်္ဂလာပါအစ်ကို ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားတွေ ဆေးသိပ္ပံနဲ့ ပက်သပ်တဲ့ အမည်တွေ၊ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်တွေကို အစ်ကိုနဲ့ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးနိုင်ပါသလားခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုက်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်လဲ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။--Phyo WP (talk) ၀၁:၅၉၊ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ (UTC)
Hi Phyo, the article about KDE mentions the en:University of Tübingen. Do you know how the city and the University is writen in Burmese? --Slunkamadon (talk) ၁၃:၂၁၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ (UTC)
Thanks for your interest in Myanmar (Burmese) wikipedia.
Tübingen - တူးဘင်ဂမ်
Tübingen city - တူးဘင်ဂမ်မြို့
Tübingen University - တူးဘင်ဂမ် တက္ကသိုလ်
ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၅:၀၈၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ (UTC)
Thank you so much! --Slunkamadon (talk) ၁၈:၁၁၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ (UTC)
Can you translate Call of Duty: Advanced Warfare into Burmese? --112.207.223.81 ၀၂:၁၆၊ ၇ မေ ၂၀၁၄ (UTC)
ကိုဖြိုးဝေ ခင်ဗျား....တယ်လီနော ကို ၂၁.၆.၂၀၁၄၊ မနက် ၉း၃၀ လာနိုင်မလား ခင်ဗျား...။ ဝီကီအတွက် သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုမေယာ
Replied with private message.
Hi Phyo WP. I tried to cleanup Category:Deletemeabit, but since I don't speak the language it's hard to decide what's good and what's not. In any case, you seem to do very useful work on this wiki. There are only five administrators here, of which only two are active and just one does admin actions from time to time - the others will likely be removed as admin due to the m:AAR. You speak the language and it looks like you understand the rules... perhaps it's an idea to request admin rights on this project? More local admins definitely can't hurt imho. You'll first get the rights temporary, but the period of time will be extended foralonger period each time you request it. Trijnstel (talk) ၁၂:၂၁၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၄ (UTC)
အစ်ကိုခင်ဗျား အနော်ရထာရဲ့ခုနှစ်ကို ငါးတန်းကျောင်းသုုံးဖတ်စာအုပ်အရ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Thanks for your contributions, bro. Scholarship simply reports his Western death year as 1077, simplifying the death year 439 ME (26 March 1077 - 25 March 1078) reported by Zatadawbon Yazawin and Myazedi Inscription. But according to Maha Yazawin (Maha Yazawin Vol. 1 2006: 180) and Hmannan (Hmannan Vol. 1 2003: 274), he died right before the Burmese new year's day, on the day ofaparticular astrological event called "Dein-Net" that occurs five to six timesayear. In the footnotes of (Maha Yazawin Vol. 1 2006: 180), the editors note that the Dein-Net event occurred on the Thingyan Akya day that year. Since the Burmese New Year's Day fell on 26 March 1078 per (Eade 1989: 81), he died on 23 March 1078. Also note that though he was about to turn 63 in the Burmese calendar, he had already turned 63 in the Western calendar. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၂၀:၁၁၊ ၂၆ ဇွန် ၂၀၁၄ (UTC)
ကျွန်တော် မေယာအမ်တီ ပါ....Template:PD-Myanmar အကြောင်းလေး ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် သိပ်မသိလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်.....Mayor mt (talk) ၁၄:၀၀၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၄ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့ အကို၊ အနှစ် ၅၀ ကျော် ပုံဟောင်းတွေကို Template:PD-Myanmar နဲ့ လိုင်စင် Tag လုပ်ထားပြီး GlobalSysop/Steward တွေ လာမဖျက်အောင် လုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။ လိုင်စင်မပါရင် ကျွန်တော်တို့ ရှားပါးဓာတ်ပုံတွေ ထပ်အဖျက်ခံရမှာစိုးလို့ပါ။ အသေးစိတ်က ဒီမှာ ပါ။ ကို Aunghtike နဲ့ Commons admin Russavia တို့ပြောထားတာလဲ ဒီမှာ  နဲ့ ကို Zawthet talk page  မှာ ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါအကို။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၂၃:၂၁၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၄ (UTC)
New sign-up page for the Medical Translation Project[ပြင်ဆင်ရန်]
This isafriendly reminder that the sign-up page at the Medical Translation Project (previously Translation Task force) has been updated. This means everyone has to sign up again. Using the new page it will be easier for us to get into contact with you when there is work available. Please check out our progress pages now! There might be work there already for you.
We are also very proud to introduce new roles and guides which allows people to help who don't have medical knowledge too!
အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာ ကျွန်တော့် ယူဇာနိမ်းက ပြဿနာနည်းနည်းရှိလို့ ဝင်မရဘူး။ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်။ Phoenix06 (talk) ၁၈:၃၂၊ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ (UTC)
Township name error[ပြင်ဆင်ရန်]
Hi, Bro, I found that in Township pages <https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA>, there are two category boxes at the bottom: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး and မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များ. In the box of ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, သကေတမြို့နယ် in တောင်ပိုင်းခရိုင် (၁၂) မြို့နယ် is wrong. I think it should be သာကေတမြို့နယ်. But I don't know how to change the information from these boxes. In page သကေတမြို့နယ်, I just redirect from သကေတမြို့နယ် to သာကေတမြို့နယ်. Please help. Thank you. Yinmyo (talk) ၀၈:၄၅၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ (UTC)
Hi Sis, to reach Template:ရန်ကုန်တိုင်း, just click ရှု in upper left corner of the box in the article. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၅:၃၃၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ (UTC)
Wow... I changed it. Thanksalot. Another question is ... can we link to Eng Wiki pages from Myanmar pages? For example, like Eng names of bacteria. Yinmyo (talk) ၀၃:၁၇၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ (UTC)
Languages at left lower corner→Add links→Language:English (enwiki)→Page:xxxxx→link with page→Comfirm. This is how we link pages between Myanmar and English Wikis. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၂:၀၄၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ (UTC)
အစ်ကိုရေ ရာဇသင်္ကြံ အမတ် သတ်လိုက်တဲ့ သီဟသူမင်းသားက အမေရိကန်ရောက် မင်းသားသီဟသူ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြည်စား သီဟသူ (သီဟသူ (ပုဂံ))အကြောင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၁:၁၁၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ (UTC)
အမေရိကန်ရောက် မင်းသားသီဟသူဟုတ် မဟုတ်ကို ကျွန်တော် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးသိမ်းမောင်၏ရာဇသင်္ကြံ ကို ဖတ်နေပါတယ်...ခဏတော့ စောင့်ပါ။Mayor mt (talk) ၁၃:၂၈၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ (UTC)
may I change "တမ်းပလိတ်:Wel-come" picture with png instead of jpg?[ပြင်ဆင်ရန်]
user တော်တော်များများမှာ ပါတတ်တဲ့ တမ်းပလိတ်:Wel-come ရဲ့ welcome smiley မှာ ကောင်းသော်လည်း ဟောင်းနွမ်းနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဒီ website မှာ ရှိတဲ့ smiley ပုံကိုယူပြီး welcome to wikipedia! စာနဲ့ ကိုယ်တိုင်စာရိုက်ထားပါတယ်။ ပုံက png file နဲ့ ဆိုတော့ ပုံကဟောင်းနွမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ smiley ပုံလေးနဲ့ စာ အပါအဝင် size ကတော့ 427 x 281 အရွယ်ပါ။ အဲဒီပုံအသစ်လေးကို တမ်းပလိတ်:Wel-come ထဲမှာ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ သမီးမသိပါဘူး။
welcome smiley ကို Researcher က တင်ထားမှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝီကီရဲ့ တမ်းပလိတ်:Wel-come ပုံလေးကို အသစ်ဖြစ်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ ပုံအသစ်တင်ချင်လို့ပါ။ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် သမီးတင်လိုပါတယ်။
--Ladybesttruthful (talk) ၁၇:၃၁၊ ၂၀ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
Thank you, Thaw Tar. You can edit the welcome template at Template:Welcome. You can replace the new png file in that line: File:Welcome3.jpg|center|မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေ စိတ်ပါဝင်စားရာ ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်၍ ဆောင်းပါး ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Please feel free to edit the template. Be bold when updating the Wikipedia. By the way, I am not an admin. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၀:၂၇၊ ၂၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီပုံကို ပြောင်းချင်နေတာဗျ။ နဲနဲကလေးဆန်တဲ့ပုံလို့ မြင်နေလို့။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၅၂၊ ၂၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
I just changed and uploaded. Please see. Thank you for your permit to upload.
I didn't know how to call, that's why, I had to use "Admin".
--Ladybesttruthful (talk) ၀၄:၄၇၊ ၂၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
I want to add facts associated Han Htue Lwin picture. I don't know how to? Please... with admiration
--User:Kyawin Naing (User talk:Kyawin Naing၊talk) 01:39/9February 2016(UTC) File:Mathew Tuck.png
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အားနာပါတယ် အကိုရေ၊ Tag လုပ်လိုက်ရတာ။ ကျွန်တော်လဲ ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ global sysop/steward တွေ ပြသနာ လာရှာမှာစိုးလို့ပါ။ ဆွေးနွေးဖို့ Wikipedia:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အိုင်ဒီယာ)#File upload policy discussion ဖွင့်ထားပါတယ်။ အကို့ရဲ့ ဝီကီကို ပံ့ပိုးပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၉:၅၃၊ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
Thanks for beingagood wikipedian in Myanmar wikipedia. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၂:၄၉၊ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
Phyo WP and 600 others like this.
Thank you, bro. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၃:၂၇၊ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
How could I type as in myamar font? Kyawin Naing (ဆွေးနွေး) ၁၂:၃၁၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
ဖောင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များအတွက် ဤစာမျက်နှာကို ရှုပါ။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၂:၄၃၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
Participate in the Ibero-American Culture Challenge![ပြင်ဆင်ရန်]
Hugs!--Anna Torres (WMAR) (ဆွေးနွေး) ၁၃:၅၈၊ ၁၀ မေ ၂၀၁၆ (UTC)
😡😡😡😡😡😡 HALVIN YAR (ဆွေးနွေး) ၁၀:၂၃၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)
Editor အကောင့် links တွေ ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပါ။[ပြင်ဆင်ရန်]
Burmeseprincess ဆိုတာ တစ်အိမ်ထဲနေတဲ့ သမီးညီမအရင်းရဲ့ အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Burmeseprincess အမည်ကိုလည်း ညီမစုစုစံကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှည့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီ ၂၀၁၂ မှာ အကောင့်စဖွင့်ခဲ့တာပါ။ စုစုစံကိုယ်တိုင်လည်း စာရေးတာ ဝါသနာပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ Burmeseprincess အကောင့်မှာ ညီမဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရေးတာ ၁၀% လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ၉၀% လောက်က သမီးကိုယ်တိုင်ပဲ ဝင်ရေးပေးနေခဲ့တာပါ။ အစကတော့ ညီမလေးစုစုစံကိုယ်တိုင် Burmeseprincess အကောင့်အနေနဲ့ ဝင်ရေးမယ်ဆိုပြီး ဖွင့်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း ကျောင်းစာတွေနဲ့ အလုပ်များလာလို့ ညီမလေးစုစုစံကိုယ်တိုင် ဝင်မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။
နောက်တော့ သမီးက Burmeseprincess အကောင့်မှာ ဝင်ရေးရင်းနဲ့ လသာ(၂)ကျောင်းစာမျက်နှာဖန်တီးဖို့ သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးရလို့ Ladybesttruthful အကောင့်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ မှာ သမီးကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။ Ladybesttruthful အကောင့်မှာကတော့ ၁၀ဝ% သမီးပဲ ရေးတာပါ။ ညီမလေးက Ladybesttruthful မှာ လုံးဝဝင်မရေးပါဘူး။
အခုလက်ရှိ ညီမလေးကတော့ Burmeseprincess မှာ လုံးဝဝင်မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ Burmeseprincess က ညီမလေးစုစုစံရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အခုတော့ သမီးကပဲ Burmeseprincess အနေနဲ့ရော၊ Ladybesttruthful အနေနဲ့ပါ ဆက်ရေးဖြစ်ပါ့မယ်။ ၂ကောင့်စလုံးမှာ သမီးတစ်ယောက်ထဲကပဲ ဆက်ရေးခွင့်ပြုစေလိုပါတယ်။
Editors who want to use MORE THAN ONE ACCOUNT for some valid reason should
between them on the respective user pages, with an explanation of the purpose of each account or of the relationship between them. Editors who use unlinked alternative accounts, or who edit as an IP address editor separate from their account, should carefully avoid any crossover on articles or topics, because even innocuous activities such as copy editing, wikifying, or linking might be considered sock puppetry in some cases and innocuous intentions will not usually serve as an excuse. ဆိုပြီး အကြံပြုချက်အရ Burmeseprincess အကောင့်နဲ့ Ladybesttruthful အကောင့်တို့ရဲ့ links တွေကို ဘယ်လို provide လုပ်ရမှာလဲ၊ ဘယ်လို link ချိတ်ရမှာလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ လမ်းပြပေးပါ။
--Burmeseprincess (ဆွေးနွေး) ၀၈:၅၅၊ ၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ (UTC)
သမီးရေ၊ account တစ်ခုထက် သုံးမယ်ဆိုရင် user page မှာ တခြား account တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီး တနည်းနည်းနဲ့ ဖော်ပြရင် Myanmar Wikipedia မှာတော့ လုံလောက်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါမျိုး  User Box လေးတွေ လုပ်ချင်ရင်လဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ account နှစ်ခု သုံးတာခွင့် ပြုမပြုကတော့ admin တွေကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဦးလေးအနေနဲ့ အကြံပေးလို့ရပေမဲ့ ခွင့်ပြုတာကတော့ admin တွေနဲ့ သက်ဆိုင်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ en:Wikipedia:Sock puppetry ကိုတော့ ဖတ်ထားပြီး English Wikipedia ဘက်မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးစေချင်ပါဘူး။ တယောက်ယောက် သတိထားမိ သွားနိုင်ပါတယ်။ သတိထားမိသွားရင် en:Wikipedia:Sockpuppet investigations လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ Thank you and happy editing. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၀:၁၈၊ ၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့။ အခုလိုဖြေကြားရှင်းပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ account နှစ်ခု သုံးတာ ခွင့်ပြုမပြုကတော့ admin တွေကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတာရယ်၊ ခွင့်ပြုနိုင်တာကလည်း admin တွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရလို့ အဲဒီအကြောင်း ၂ ချက်ကို ညီမလေးစုစုစံကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ Burmeseprincess အကောင့်ပိုင်ရှင် အစစ်က သူဖြစ်နေတော့ သူကျောင်းအားတာနဲ့ ဝီကီမှာ သူပြန်ရေးချင်ရင်ရေးမယ်ဆိုပြီး သူ့အကောင့်ကို သူပဲသုံးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညီမလေးစုစုစံရဲ့ Burmeseprincess အကောင့်ကို လုံးဝမသုံးတော့ပါဘူး။ Ladybesttruthful အကောင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲ သုံးပါတော့မယ်။ အကောင့် နှစ်ခု မသုံးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
--Burmeseprincess (ဆွေးနွေး) ၁၅:၄၁၊ ၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ (UTC)
ဆရာကြီးPhyo WP ရှင့် လေးစားစွာနဲ့စာရေးလိုက်ပါတယ် ညီမက ဆောင်းပါးဖန်တီးရှင်ဖြစ်ပါတယ် ညီမအမှားတစ်ခူကြောင့် blockedထိထားပါတယ်ရှင့် blockedထိတာပြဿနာအကြီးမရှိပေမဲ့ ညီမ ဖန်တီးထားတဲ့ articleတွေက အဖျက်ခံရနိုင်တယ်လို့ ကိုKyiက ပြောထားပါတယ်
ညီမက မြန်မာ ဆောင်းပါးများကို eng ဘာသာဖြင့် ၃ရက် ၁ခု ပုံမှန်ဖန်တီးလာခဲ့ပါတယ် အဖျက်ခံရတာတွေ ၃ခုလောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက adminတွေက လက်ခံထားပါတယ်ရှင့် ဆောင်းပါး50နီးပါးရှိနေပါပြီ , မြန်မာဆောင်းပါးကို ဖန်တီးသူက ၁ပတ်တောင် တစ်ခါ မတွေ့ရပါဘူး ညီမကတော့ ညမအိပ်ပဲ ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ် အခုblockedခံထားရတော့ G5 အရ အကုန် အဖျက်ခံရမှာလားရှင့် တစ်ချိ့ဆောင်းပါးတွေက ကြာနေပါပီ အကုန်ဖျက်ခံရရင်တော့ ရင်ကျိုးပါပြီ အခုတောင် G5 ကို မြင်ပီး ညအိပ်မရတော့ပါဘူးရှင် ဆောင်းပါးတစ်ခုဖန်တီးဖို့ မလွယ်ပါဘူးရှင် ဖန်တီးပီးသားတွေ လည်း wikiက ချမ်းသာမပေးဘူးလားရှင့် အမှားတစ်ခုကြောင့် အချိန်ကုန်ခံခဲ့တာတွေ တစ်ခါထဲ ပျောက်ကွယ် သွားမှာပေါ့နော်
အဖျက်မခံ ရအောင် ဘယ်လိူ လုပ်ရင် ရမလဲရှင့် မဖျက်ရင်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါပြီ နောက်ထပ် ထပ်မရေးရလည်း ကျေနပ်ပါတယ် ကမာ႓့စည်းကမ်းအကြီးဆုံးကwikiဆိုတာလက်ခံသွားပါပီ တုန်လှုပ်မိပါတယ် အခု ရေးခဲ့တာလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပီးသေချာလေး သိချင်လို့ပါရှင့် ဆရာကြီးဖြေပေးပါဦး တောင်းဆိုပါတယ် မြန်မာwikiဘက်လည်း အားဖြည့်ပါ့မယ် တတ်နိုင်သလောက် 楊過007 (ဆွေးနွေး) ၁၈:၅၄၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
ဆြာကြီး Phyo WP အဖတ်လုပ်ပါဦး စောင့်နေတာပါ 楊過007 (ဆွေးနွေး) ၂၃:၀၇၊ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC) ဆြာကြီးရှင့် သူများတွေကြ ဖြေပေးပြီး ညီမကြ ဘာလို့ မဖြေပေးတာလဲ လူဆိုတာ အမှားနဲ့မကင်းပါဘူး အမှန်သိမှ အမှား ကိုဆင်ခြင်နိုင်မှာပါ ညီမက eng အရမ်း မကျွမ်းပါဘူး eng wikiမှာရေးမိတာက "ရေမရှိပဲ လှေ လှော်နေသလိုပါပဲ" sock ကမထင်မှတ်ပဲ ဖြစ်သွားတာပါ ဒီလောက်ထိ ဆိူး ဝါးမယ်ဆိုတာ သာသိရင် ဆင်ခြင်မိမှာပါ အခုဖြစ်တော့ အကောင့်ပြန်မလိုချင်ပါ အရင်က ဖန်တီးခဲ့တာတွေ ပျက် မပျက်ပဲ သိချင်တာပါ ဆြာကြီးလမ်းညွှန်မှုနဲ့ ဒီလောက်ထိ ရေးသားနိုင်ခဲ့တာပါ ကျေးဇူးပါနော်
ဟုတ်ကဲ့၊ မင်္ဂလာပါ။ ဆောင်းပါးကောင်းတွေ ရေးထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ တကယ်ဆိုရင် မနှစ်က Sockpuppetry အတွက် တခါ အပိတ်ခံရပြီး ထဲက သတိထားသင့်တာပါ။ အပိတ်ခံရတဲ့အတွက်လဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အပိတ်ခံရရင်တောင် ၆လလောက်ကြာရင် ပြန်ဖွင့်ပေးကြပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ လျောက်ပြောလိုက်တာတွေ၊ account အသစ်တွေ ဖွင့်တာတွေကြောင့် ၆လကြာလို့ unblock request လုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလားတောင် မပြောတတ်ပါ။
အရင်က ဖန်တီးထားတာတွေမှာ ကိုယ်တယောက်ထဲ ရေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူမှ ဝင်မရေးထားတာတွေက ပျက်နိုင်ပေမဲ့ သူများတွေလဲ (minor/maintainance/spelling လောက် မဟုတ်ဘဲ) ဖြည့်စွက်ရေးသားထားရင် G5 နဲ့ မကိုက်ညီလို့ ဖျက်လို့မရပါ။ ဘယ်သူမှ ဝင်မရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကတော့ ပျက်ကောင်းပျက်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကက နောက် account အသစ်ထပ်ဖွင့်လို့ SPI ထပ်လုပ်ခံရရင် အရင်ရေးထားတာတွေ လိုက်ကြည့်ရင်း တွေ့သွားမှသာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။7Nov မတိုင်ခင်က ဆောင်းပါးတွေကတော့ block လုပ်မခံရခင်က ရေးထားတာမို့ G5 နဲ့ အကျုံးမဝင်ပါ။ (မနှစ်က block ခံရတဲ့ account နဲ့က သပ်သပ်ဆီ block ထားတာမို့ပါ)
ခုတော့ ပြီးသွားတာ ရက်နည်းနည်း ကြာပြီဆိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ရေးထားတာတွေ အကုန် လိုက်ကြည့်တဲ့သူ မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ ပြန်သတိထားမိနိုင်တဲ့ တည်းဖြတ်မှုတွေ ထပ်မလုပ်တော့ရင်၊ အရင် account တွေကတည်းဖြတ်ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို လုံးဝ သွားမထိတော့ရင်၊ ဘယ်သူမှ ထပ်သတိမထားမိတော့ရင် အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ --ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၂:၀၅၊ ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
sockpuppetry ဆိုတာကို နားသိပ်မလည်လို့ နည်းနည်း ထပ်ရှင်းပြပါလား၊ ရှင်းပြထားတဲ့ လင့်တွေ ရှိရင်လည်း ညွှန်ပြပေးပါ၊ လိုက်ဖတ်ကြည့်တာတော့ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ဖွင့်ထားတယ်၊ အကောင့်တုဖွင့်ပြီး လိမ်လည်မှုလား၊ ဘာကို လိမ်လည်တာမို့လို့လဲ ဘဝကလှပတယ်၊အချစ်ကစားမရတယ် (ဆွေးနွေး) ၀၂:၄၂၊ ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
en:Wikipedia:Sock puppetry ကို ပြောတာပါ။ account ခွဲတွေသုံးတာကို ချွင်းချက် အနည်းငယ်မှအပ သုံးခွင့်မရှိတာပါ။--ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၈:၀၃၊ ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Phyo WP ဆြာကြီးခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရမ်းပြည့်စုံပါတယ် ဆောင်းပါးတွေ မဖန်တီးပဲမနေနိုင်လို့ ယခုအကောင့်လေးအား အသုံးပြူခွင့်ပေးပါ အရင် ဖန်တီးထားတာတွေ မထိတော့ပါဘူးး တကယ်wikipedia ကို ကူညီချင်လို့ပါ ဒါထပ် ပိတ်ရင်တော့ မသုံးတော့ပါဘူး အခု အကောင့်သစ် ဆိုတော့ ညီမ ဆောင်းပါး ဖန်တီးလို့မရလို့ပါ... ဖန်တီးလို့ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ အရင်ကတော့ Draft မှာရေးသားပါတယ် ဒါပေမဲ့ marked လုပ်ဖို့ အရမ်းကြာနေလို့ပါ .... အခု policyအသစ်က edit 100ကျော်မှ ဆောင်းပါး ဖန်တီးခွင့် ပွင့်တာလားမသိဘူးးလမ်းညွှန်ပေးပါဦး ဆရာရှင့်... Happy New Year ပါ ပျော်ရွှင်ပါစေSuSu Mdy (ဆွေးနွေး)
အခု ပေါ်လစီအသစ် ACTRIAL အရ အကောင့် အသစ်တွေဟာ ၄ရက် ပြည့်ပြီး တည်းဖြတ်မှု ၁၀ ခုရှိမှသာ article အသစ်တွေ တန်းရေးလို့ရမှာပါ။ အကောင့် အသစ်က ခု draft မလုပ်ဘဲ တန်းရေးလို့ ရပြီ ထင်ပါတယ်။ အရင် တည်းဖြတ်ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ရှောင်ဖို့နဲ့ တည်းဖြတ်မှုနဲ့ ရေးသားမှုတွေကို ပြန်ဖျက်လဲ history မှာ ပြန်ဖျက်လို့မရတာကို သတိထားစေလိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အရင် account မှာ သုံးခဲ့တဲ့ IP address တွေနဲ့ ခုသုံးတာနဲ့ မတူရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။ --ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၃:၅၂၊ ၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
ဆြာကြီး ကျေးဇူးကိူ မမေ့ပါဘူး အချိန်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ... ဆရာအလုပ်တစ်ဖတ်နဲ့wikiကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
ညီမ blockခံရချိန်က အကောင့်သစ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ဆာင်းပါးများ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် (e.g Ye Yint Aung, Nay Soe Maing) ဒါပေမဲ့လည်း G5 လက်ချက်နဲ့ ဖျက်ခံရပါတယ် အဲ့ဆောင်းပါးတွေကို အကောင့်သစ်နဲ့ ပြန်ရေးလည်း G5 or blocked user created နဲ့ပဲ ပျက်ပါတယ်... အဲ့တာ မတရားဘူးလို့ ထင်မိပါတယ် ဘာလို့ဆိုတော့ တခြားဖုန်းအသစ် ကနေ အကောင့်သစ်နဲ့ ပြန်ဖန်တီးရေးသားလည်း လက်မခံဘူးဖြစ်နေပါတယ် (တခြားhansetအသစ် ဖုန်းအသစ် နဲ့ အကောင့်သစ်ဖွင့်ရေးရင် တခြားလူတစ်ယောက် လိုဖြစ်သွားပါပီ) ဒါပေမဲ့ g5 မိတာတွေပြန်ရေးရင် မရဘူးဖြစ်နေတယ် .... အကောင့်ဟောင်းက ဖန်တီးးမှဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်
အကောင့်သစ်ဖွင့်တိုင်း ညီမ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ Ye Yint Aung fanတစ်ယောက်က wiki accဖွင့်ပီး Ye Yint Aung wikiရေးရင်တောင် ရေးလို့ရမယ် မထင်ပါဘူး ညီမရေးတယ် ထင်ပီးထပ်ပိတ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ....အဲ့အတိုင်းဆို (blocked user ဖန်တီးထားဖူးတဲ့ ဆောင်းပါး ကဖျက်ခံရရင် မည်သူမှ အဲ့နာမည်နဲ့ ဖန်တီး ခွင့်မရှိဘူးလားရှင့်) တခြားဝါရင့် user or ညီမနဲ့ မသတ်ဆိုင်တဲ့ အကောင့်က ဖန်တီးပေးမှရမယ်ထင်ပါတယ် နည်းလမ်းလေး ပြောပြပါဦး ကျေးဇူးပါဆရာရှင့် SuSu Mdy (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၇၊ ၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
SP account တွေဟာ အရင်က စိတ်ဝင်စားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေပဲ ဆက်စိတ်ဝင်စားကြ/ရေးသားပုံ တူကြပြီး ပြန်ဖန်တီးကြတာ ထုံးစံလိုပါပဲ။ ခုမှ စရေးတဲ့သူတယောက်ဟာ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို wiki markup သုံးပြီး ရေးဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ en:Wikipedia:Signs of sock puppetry မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ style အသစ်နဲ့ မရေးဘဲ အဟောင်းကို ပြန် paste လုပ်တဲ့အခါ သုံးတဲ့ ref တွေရဲ့ retrieved လုပ်တဲ့နေ့စွဲကလဲ အဟောင်းတွေနဲ့ သိသာပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးတွေ ပြန်ရေးချင်ရင် account အဟောင်းမဟုတ်ရင် အဆင်ပြေဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
SPI လုပ်ရင် global contributions ကို ကြည့်လေ့ရှိတော့ block လုပ်ခံရတဲ့ account ရဲ့ discussion အောက်မှာ ခု အသစ်နဲ့ ဆက် ဆွေးနွေးထားတော့ ဒီ account လဲ ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင် သတိတော့ ရှိစေချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။--ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၅:၀၂၊ ၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
ညီမက ဖုန်း၄လုံးလောက်ရှိတာဆိုတော့ ဒီအကောင့်ကို ဒီမှာတင်ရပ်လိုက်ပါ့မယ် ဆရာကြီးအားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖြေပေးထားတာတွေက လုံးဝ ပြည့်စုံပါတယ် ကျေးဇူးပါ ဆရာကြီးလည်း အဆင်ပြေပါစေ
ရဲထွေးအောင် myanmar wikiမှာတော့ ရေးပီးပါပြီရှင့်
သူက movie တွေမှာပါ သရုပ်ဆောင်ပြီး comedy star လည်းဖြစ်ပါတယ် celeတွေထက်တောင် နာမည်ကြီးပါတယ်
အခုရက်ပိုင်း media ပေါင်းစုံကပါ သူ့အကြောင်းတင်ထားတော့ ref လို့ ကောင်းမဲ့linkတွေ အများကြီးရှိပါတယ်
အခုeng လိုရေးထားတဲ့ Myanmar Times Cover ref လည်းရှိပါတယ် အကြံပေးပါဦး
https://www.mmtimes.com/news/police-arrest-suspect-slaying-facebook-celebrity.html SuSu Mdy (ဆွေးနွေး) ၁၅:၁၉၊ ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
en:WP:CELEBRITY အရ အနုပညာ ရှင် တယောက်အနေနဲ့ notable ဖြစ်အောင် ရေးနိုင်ရင် ရပါတယ်။ အဲဒါကို reference ကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးနိင်ရင် ရပါတယ်။ အခု လတ်တလော အဖြစ်အပျက်ကို ဦးတည်ပြီး ရေးရင် en:WP:BLP1E နဲ့ en:WP:BIO1E အရ သတင်းများတွင် နာမည်ကြီးတာ အသတ်ခံရတဲ့ မှုခင်း ဖြစ်ပြီး ရဲထွေးအောင် တဦးတည်းသပ်သပ်က notable မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်း သေချာ မဖတ်ဖူးလို့ notable ဖြစ်မဖြစ် မပြောတတ်ပါ။ အရေးအသားပေါ်ပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ --ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၁:၅၅၊ ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
How to edit or create[ပြင်ဆင်ရန်]
Dear Sir,Phyo WP
ျွန်တော် Wikipedia eng မှာ create and edit လုပ်တာ ၃နှစ်လောက်ရှိပါပီ ... မြန်မာ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သတ်ပီးပဲလုပ်ပါတယ် ...အခုက create လုပ်မယ်ဆို မယ်ဆို Draft အရင်လုပ်ခိုင်းနေပါတယ် ... အဆင်မေပြေပါဘူး ...အဲ့တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ.... Security တင်ကြပ်ထားတယ်ထင်ပါတယ် .. မြန်မာ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သတ်ပီးက reference ရှာရတာတော်တော်ခက်ပါတယ် website တွေမှမသုံးတာ ... အခု ဘယ်လိုဆက် လုပ်ရမလဲ ခင်ဗျာ Myanmar456 (ဆှေးနှေး) ဝ၄:၂၅၊ ၁၅ ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့၊ Sockpuppetry ကြောင့် အပိတ်ခံရတာဆိုတော့ နောက် account အသစ်နဲ့ အဲဒီ article တွေထပ်ရေးလဲ အပိတ်ခံရဦးမှာပါ။ edit လုပ်တာ ၃နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ ခု အပိတ်ခံရတဲ့ account တွေ အပြင် အရင် account တွေလဲ ရှိဦးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ (အရင် နှစ်တွေက မြန်မာဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ရေးနေတဲ့ account တွေနဲ့ တယောက်ထဲပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်) အဲဒီ account အဟောင်းတွေ ပြန်သုံးလဲ ထပ် ပိတ်ခံရမှာပါ။ en:Wikipedia:Standard offer အရ ၆လလောက် စောင့်ပြီး unblock request ပြန်လုပ်မှ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရှိရင် talk page မှာ ရေးခဲ့ပါ။ ကူညီပေးပါမယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ --ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၆:၂၄၊ ၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Dear Sir, Phyo WP
ညီမကို ဘာလို့ မကူညီတာလဲရှင့်.... FBမှာလည်း အကြိမ်ကြိမ်မေးသော်ငြားလည်း အဖတ်မလုပ်တော့ပါ...activeအဖြစ်ဆုံးနဲ့ ဆောင်းပါးတွေက်ို အမြဲ ပြုပြင်သူ ဖြစ်တာကြောင့် ကူညီပေးသင့်ပါတယ်... Eng wikiမှာ activeဖြစ်တာမှာ ဒီလူလေး ၅ယောက်လောက်ရှိတာ ဂရုဏာ ရှေ့ထားပီး ကူညီသင့်ပါတယ်... ကော်ပီ ရိုက်ကို ရှေ့ရှောက် တကယ်သတိထားမှာပါ တစ်ခါသေဖူး ပျဉ်ဖိုး နားလည်ပါတယ် ဆြာရေ... ပီးတော့ အဲ့အကောင့်လေးက အဟောင်းဖြစ်တာမို့ နမြောလို့ပါ အသစ်လည်း မသုံးချင်တော့ပါဘူးးး ညီမ ဘယ်လိုတွေ ကူညီလဲ ဆိုတာ ဆြာမျက်မြင်ပါ အမတ်ဆောင်းပါးတွေဆို အသေးမွှားကအစ တစ်ခုချင်းပြင်ပေးပါတယ်... ကူညီမေဆို အရမ်း ပျော်မိမှာပဲ editမလုပ်ရမနေနိုင်လို့ပါ... ဆြာကအဖတ်မလုပ်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည် EpcMyanmar (ဆွေးနွေး) ၁၀:၂၀၊ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
Dear Sir, Phyo WP ဆြာဖြိုးရေး မအားမှန်းသိပါတယ် ညီမရေးထားတာကြာပီ ဖြစ်တဲ့အိမ်ဂျယ်လမုမ်နဲ့ဟန်သီဆောင်းပါးတွေရယ်နေခြည်အူး.ယုသန်တာတင်ဆောင်းပါးတွေကိုကျေးဇူးပြုပီးကြည့်ပေး့ပါအူး အရေးကြီးလို့ပါ ရေးထားတာလည်းကြာပါပီအရှုပ်ရှင်းလည်းမရှိပါကြည့်ရတာဘာမှမပင်ပန်းပါဘူး နိုတဘယ် လည်းဖြစ်ပါတယ် တကယ်အရေးကြီးလို့ပါစောင့်ရတာလည်းကြာလှပါပီသူများကြည့်တာစောင့်မေဆို၃လလောက်စောင့်ရမှာမို့ပါ အခုမြန်မာလိုအသံထွက်အမှားတေနဲ့ရေးမိတာ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဟိုလူတွေက်ိုကြောက်လို့ပါ ကျေးဇူးဆြာEpcMyanmar (ဆွေးနွေး) ၀၂:၁၉၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
ဗ်ဳးးေပးပါအူးး plz EpcMyanmar (ဆွေးနွေး) ၁၂:၀၄၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Phyo_WP&oldid=426478" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၂:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။